आमाको मुख हेर्ने दिन सलमानले शेयर गरे सौतेनी आमाको तस्विर, कस्तो छ सम्बन्ध ? - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
आमाको मुख हेर्ने दिन सलमानले शेयर गरे सौतेनी आमाको तस्विर, कस्तो छ सम्बन्ध ?
सोमबार, वैशाख २७ २०७८
कोरोना कहरको बिचमा पनि भारतमा आमाको मुख हेर्ने दिन मनाइरहेका छन् । बलिउडका कलाकारहरुले पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत आमालाई शुभकामना दिइरहेका छन् । बलिउडका चर्चित अभिनेता सलमान खानले पनि आफ्नो आमाको तस्विर राख्दै शुभकामना दिएका छन् । उनले आफ्नो दुईटी आमाको तस्विर राख्दै शुभकामना दिएका हुन् । जस्ले गर्दा उनका फ्यानहरु निकै नै उत्साहित बनेका छन् ।
को हुन् सलमानको सौतिनी आमा हेलेन ?
हेलेन ५० को दशकको फिल्ममा महत्वपूर्ण हिस्सा बनाएकी एक चर्चित डान्सर हुन् । बर्माअघि कोलकाता र त्यसपछि मुम्बई पुगेकी हेलेनको जीवनमा थुप्रै उतारचढाव थिए । हेलेनले पहिलो विवाह आफूभन्दा २७ वर्ष जेठा निर्देशक एनपी अरोडासँग गरिन् तर आफ्नो ३५ औं जन्मदिनमा उक्त विवाह तोडिन् । त्यसपछि उनको जीवनले एउटा नयाँ मोड लियो र उनको लेखक सलिम खानसँग प्रेम बस्यो । तर हेलेन र सलिमको यो प्रेमकथा आज परिवारको तस्बिर हेर्दा जति राम्रो र सहज देखिन्छ, त्यस्तो भने थिएन ।
सलिम खानका दुई श्रीमती र बालबच्चा धेरैजसो सँगसँगै हाँसिरहेको घुमिरहेको देखिन्छन् । थुप्रैपटक सलमान खानले आफ्नी सौतेनी आमा हेलेनलाई हात समातिरहेको पनि देख्न सकिन्छ तर मिडिया रिपोर्टलाई विश्वास गर्ने हो भने सलिम खान र हेलेनको सम्बन्धलाई जब स्विकारोक्ति दिनु थियो तब सलिम खानका सन्तान अर्थात् सलमान खान यो सम्बन्धका लागि तयार थिएनन् । सलमान खान, अरबाज खान, सोहेल खान र अलवीरा, सलिम र सलमा खानका सन्तान हुन् । वास्तवमा सलमा खानको वास्तविक नाम सुशिला हो र सन् १९६४ मा सलिमसँग विवाह गरेपछि सुशिला चरकले आफ्नो नाम सलमा खान राखिन् । तर सन् १९७५ पछि सलिम खानको जीवनमा हेलेनको एन्ट्री भइसकेको थियो ।
बर्मामा बस्ने हेलेन रिचर्डसन गरिबीका कारण फिल्ममा ब्याकग्राउन्ड डान्सर बनिन् र त्यसपछि पर्दा अगाडि आइन् । त्यसपछि हेलेन बिस्तारै फिल्ममै छाइन् । करिब ४ सय फिल्ममा संलग्न भइसकेकी हेलेनले दुई फिल्मका लागि फिल्मफेयर अवार्ड पाएकी छिन् ।
सलिम हेलेनसँग नजिक भएपछि सलमा उनीहरुको सम्बन्ध स्विकार्ने पक्षमा थिइनन् । उनका चारैजना सन्तान आफ्नी आमाको पक्षमा थिए । तर समयसँथै हेलेनलाई यो परिवारले अपनायो र आज सलमान खान आफ्ना दुई आमालाई निकै प्रेम गर्छन् ।
दैनिक भास्करमा प्रकाशित सलिम खानको एक लेखमा उनले लेखेका छन्, ‘सलमान, सोहेल र अरबाजलाई लाग्यो कि उनीहरुले अर्की एक आमा पाएका छन् र हेलेनलाई लाग्यो कि उनले एक रेडिमेड परिवार पाएकी छिन् । त्यसकारण हामीले विवाहपछि बच्चाबारे केहिले पनि सोचेनौं । यसका साथै जुन उमेरमा हामी भेटेका थियौं त्यतिबेला हामी बच्चाबारे सोच्ने मानसिकतामा पनि थिएनौं ।’